कसरी भेटिन्छ सुन ? खोज्न आइपुग्छन् भारतीय (फोटो फिचर) - Birgunj Sanjalकसरी भेटिन्छ सुन ? खोज्न आइपुग्छन् भारतीय (फोटो फिचर) - Birgunj Sanjalकसरी भेटिन्छ सुन ? खोज्न आइपुग्छन् भारतीय (फोटो फिचर) - Birgunj Sanjal
कसरी भेटिन्छ सुन ? खोज्न आइपुग्छन् भारतीय (फोटो फिचर)
३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०८:५०
सुनसरी । भारत पश्चिम बंगलका लक्षुराम मेताम हरेक सोमबार धरानको सडकमा सुन खोज्न आईपुग्छन् । सडकमा सुन खोज्नु उनको जिविकोपार्जनको एउटा गतिलो माध्यम हो ।
लक्षुराम जस्तै दर्जन भन्दा बढी मानिस धरानको सडकमा सुन खोज्न आउने गरेका छन् । धरानको रत्नरोडमा हरेक सोमबार सडकमा ब्रस लगाएर सडकको धुलो बढारिरहेका थुप्रै मानिस देख्न सकिन्छ ।
उनीहरुले किन यसरी सडकमा मन लगाएर बढारेका हुन भन्ने जो कोहीलाई लाग्न सक्छ । तर धरानको रत्नरोडमा रहेको सुन पसल अगडी यसरी सडकको धुलो बढारेर सुन खोजिन्छ । सुन पसलको अगडिको धुलो बढारेर जम्मा पारिएको धुलो, फोहोर मैलालाई काठको आरीमा पानीले पखाल्दा सुन, चाँदी फेला पर्ने गरेको लक्षुराम मेताम बताउछन् ।
हरेक हप्ता सोमवारको दिन धरानको बजार बन्द हुने र रत्नरोडमा रहेका सुन पसलहरु पनि बन्द हुने भएकोले हरेक सोमबार धरानको रत्नरोडमा सुन खोज्नेहरुको भिड हुन्छ । कत्ति मानिसलाई यसरी सडकको धुलो ब्रस लगाएर बढारेर जम्मा गरी बोरामा पोको पार्ने ती मानिसहरुलाई देखेर अचम्म मानेर हेर्ने गर्दछन् । तर उनीहरुले दिनमा एक जना बराबर पाँच आनी सम्म सुन र चादी फेला पार्ने गरेको बताउँछन् ।
लक्षुराम जस्तै अर्का भारतीय राजु पहिरे पनि धरानमा हरेक हप्ता सडकमा सुन खोज्न आईपुग्छन् । उनी पनि धरानको रत्नरोडमा सडक बढारेर सुन फेला पर्ने गरेकोले गर्दा आफनो जीवन उपर्जनमा सहजता मिलेको बताउँछन् ।
यसैगरी अर्का सुन खोज्न धरान आईपुगेका राजेशको पनि घर भारत नै हो । उनी पनि धरानको सडकमा सुन खोज्न नियमित आउने गरेको बताउँछन् । धरानको रत्नरोडमा सडकको धुलो बढारेर सुन खोज्नेहरु सबै जसो भारतीय नै रहेका छन् । उनीहरुले धरानमा मात्रै होईन पूर्वका विभिन्न शहरहरु विराटनगर, इटहरी, दुहवी, लाहान लगायतका स्थानहरु सम्म पुगेर यसरी सुन खोज्ने गर्दछन् । सुन पसल र सुन बनाउने ठाउँ अगडीको सडकको धुलो बढारेर काठको आरीमा पानीले पखाल्दा सुन चाँदी भेटिने भएकाले उनीहरु पूर्वका विभिन्न ठाउ सम्म पुगेर सडकको धुलोमा सुन खोज्ने गरेको राजेशले बताए ।
सुनका गहना बनाउँदा सानो सानो धुलो सुन र चादीका टुक्रा टुक्रिने भएकोले यस्ता सुन चाँदीहरु धुलोमा हुने भएकाले एक प्रकारको काठको आरीमा पानीले पखाल्दा सुन निस्कने उनीहरु बताउँछन् । त्यही सुन प्रशोधन गरेर पुनः विक्रि गर्दा राम्रो पैसा आउने भएकाले पनि उनीहरु पूर्वका विभिन्न शहरहरु सम्म पुगेर सडक बढार्ने गर्दछन् । धरानको अरु सडकहरुमा सोमबार बजार बन्द हुने भएकोले अलि फोहोर देखिने गरे पनि धरानको रत्नरोडमा भने बिहानै देखि सडकमा ब्रस लगाएर बढार्नेहरुको उपस्थितिले गर्दा रत्नरोड अरु सडकको तुलनामा सफा देखिने गर्दछ ।
हरेक सोमबार झिसमिसे देखिनै सडकमा धुलो बढारेर जम्मा गर्न आउने भारतीयहरुले सुन चाँदी फेला पार्ने गरेको देख्दा पहिले पहिले निकै अनौठो लाग्ने गरेको बताउने स्थानीय व्यापारी जितुराज गुप्ता भन्छन् उनीहरुको मेहेनेत हे¥यो भने साँच्चै सुन पाउन गाह्रो रहेछ । हरेक हप्ताको सोमबार सुन खोज्दै आईपुग्ने कतिपय भारतीयहरु धरानका होटल र स्थानीय धर्मशालामा बास बसेर पनि सुन खोज्ने गर्दछन् ।
उनीहरुले जम्मा गरेको सडकको धुलो, फोहोर मैलालाई बोरामा लगाएर नजिकै तुर्के खोलामा लगेर काठको आरीमा पखाल्ने र सुन निकाल्ने गर्दछन् । यसरी उनीहरुले निकालेको सुन पुनः प्रशोधन गरी विक्रि गर्ने गरेका छन् । सडकको धुलो मैलो बढारेर दैनिक ५, ६ आनी सुन चाँदी भेटिनुले गर्दा पनि धरानको रत्नरोड सुन खोज्ने भारतीयहरुको मुख्य आर्कषण स्थल बनेको छ ।
सडकको फोहोर धुलोमा सुन खोज्नेहरुले गर्दा धरानको रत्नरोड निकै सफा हुने गरेको स्थानीयको भनाई छ । जे होस मेहेनत ग¥यो भने धुलोमा सुन भेटिदो रहेछ भन्ने भारतीयहरुले पुष्टि गरेका छन् । धरानको रत्नरोडको धुलोमा सुन भेटिदोरैछ भन्ने उनीहरुले सावित गरेका छन् ।